Filtrer les éléments par date : lundi, 29 juin 2020
lundi, 29 juin 2020 21:02
Ramena Antsiranana II: Nahazo trondro goavambe ny mpanjono
Trondro lehibe amin’ny karazany antsoina hoe : « mérou » no azon’ny mpanjono niandriaka tany amin’ny faridranomasin’i Ramena, Antsiranana II ny alahady 28 jona 2020. Gaga ny olona nahita an’ity hazandranomasina goavambe ity.
lundi, 29 juin 2020 20:51
Imerintsiatosika RN1: Kamiao may kila hotohoton’ny afo
Kamiao iray feno entam-barotra hizotra mianandrefana manaraka ny lalam-pirenena voalohany no nirehitra, tsy lavitra ny toby mpaninjara solika eo ampivoahana ny tanànan’i Imerintsiatosika io hariva io. May kila hotohoton’ny afo ilay kamiao sy ny entana tao anatiny. Nanampy trotraka ny fisian'ny solika, tamin'ireo entana tao anatiny, ka nampiitatra ny firehetana. Tsy nisy aina nafoy.
Ambalavao Tsienimparihy: Lehilahy iray mpisavika, maty voatsindrin’ny omby
Namoizana ain’olona iray ny tolon’omby tao Tsianindohany Fokontany Maroparasy, Ambalavao Tsienimparihy, nentina nankalazana ny faha-60 taona niverenan’ny fahaleovantenan’i Madagasikara. Voatsindrin’ny omby avy nitroatra ny iray tamin’ireo mpisavika, ka izay no voalaza nitarika ny fahafatesany.
Fanatanjahantena ny tolon’omby na savika, ary ny faritra Betsileo no tena ahitana azy io.
lundi, 29 juin 2020 17:27
Covid-19: Nitokona ireo mpianatra 7è-8ème année HJRA
Manoloana ny fihanaky ny valanaretina Covid-19 izay mahazo ny hopitaly iasan'ireto mpianatra mpitsabo, nefa tsy misy fitaovana fiarovana azon'izy ireo, tsy misy indemnité, nefa dia miasa andro aman'alina, ka rehefa nifampidinika maharitra tamin'ireo tompon'andrikitra nefa tsy nisy vahaolana mazava naroso, dia nitokona androany ireo mpianatra ho dokotera 7è-8ème année, mitaky ny anomezana fitaovana fiarovana azy ireo, mitaky ihany koa ny indemnité izay efa nampanantenain'i Filoham-pirenena hoy hatrany izy ireo.
Tsy hiverina hiasa ireto farany raha ny angom-baovao raha tsy mivaly ny fitakian'izy ireo.
Ny Bloc fandidiana ao amin'ny HJRA amin'izao dia mbola mihidy, fa ireo marary mafy ihany no raisina ao, ary mbola diovina ny toerana satria mihanaka ny valanaretina.
lundi, 29 juin 2020 12:05
Covid-19: Mihoatra ny 10 tapitrisa ireo voa, ary 500 000 ireo maty maneran-tany
Miakatra hatrany ny isan'ireo voan'ny Covid-19 maneran-tany, tafahoatra ny 10 tapitrisa ankehitriny ireo mitondra ny tsimokaretina, ary 500 000 ireo lavo.
Etats-Unis no lohalaharana ankehitriny, 2 500 000 mahery ireo voa, 127 000 ny maty.
Brezila no manaraka azy eo, 1 345 000 no voa, 57 000 no maty.
Ny any Eoropa, efa nidina ny isan'ireo voa, fa atahorana hirongatra indray izao ny andihany faharoa, izay heverin'ny mpandinika fa ho mafy noho ilay andihany voalohany raha tsy voafehy.